tsunami soo gaartay dalka Tayland 2004
Tsnunami oo soo gaartay qaarada Aasiya
Tsunami waxaa la dhahaa Hirr ama Mowjad aad u weyn oo biyaha badda hoostooda ka soo kaco, waa marka oo Dhulgariir badda ka dhaco. Tsunamiga waxoo geestaa khasaaro aad u weyn, waxoona aad u burburiyaa guryaha xeebaha u dhow.
Tsunamiyaasha u danbeeyayEdit
2011 waxaa magaalada Sendai ee dalka Jabaan ka dhacday dhulgariir aad u weyn oo tsunami kadhashtay, tsunamigaan woxoo aad u jajabshay xeebaha dalka jabaan, waxaana ku dhintay dad gaaraayo ilaa 1,897 oo qof.
2006 waxaa jasiirad ka mid ah dalka Indonesia ka dhacay dhulgariir oo tsunami dhaliyay,waxoona ka soo bilaawday biyaha badda hoosteeda. waxaa ku dhintay dad kabadan 700 oo qof.
2004 waxaa Badweynta Hindiya ka dhacday dhulgariir aad u weyn oo tsunami aad u culus dhaliyay, dhulgariirkaan waxoo ka soo bilaawday jasiirad ka mid ah dalka indonesia, woxoona soo maray wadamada kala ah Tayland, Siri Lanka, Hindiya, Jasiirada Maldiif, Malaysiya, Bangladesh, Mayanmar, Soomaaliya, Kenya, Tansaaniya, Madagaskar, Seyshelles ilaa Koonfur Afrika. Waxaana ku dhintay dad ka badan 230,000 oo qof.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsunami&oldid=173362"
Last edited on 27 Maarso 2018, at 08:55
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 27 Maarso 2018, marka ee eheed 08:55.